You are here: Home / Archives for Xalinta Koritaanka / Waxa Loogu kobcinayo / Khudaarta / Baradhadu
Yaanyo ama Baradhada! Labada Labadoodba ha Laga Qaado!
Vietnam - Geedka tamaandhada cusub ee baradhada. Labadani waxay ku koraan dhirta isla. Wanaagsan haddii aadan haysan meel ku filan!
Filed Under: Baradhadu, Tamaandho, Khudaarta, Waxa Loogu kobcinayo Tagged Iyada oo: Vietnam